INOA सँग अमोनिया रहित शेडको विस्तृत एर्रे छ। त्यहाँ समग्र ११ available उपलब्ध छन्। यदि तपाईं कभरेजमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तलको छविले तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने परिणाम र टोन प्राप्त गर्न मार्गदर्शन गर्दछ।
INOA, हाम्रो पहिलो अमोनिया-रहित स्थायी टेक्नोलोजी, एक सफलता संग कपाल रंग उद्योग क्रान्ति ODS² तेल वितरण प्रणाली.
INOA छ %०% तेल, weeks हप्ताको वितरण गर्दै तीव्र हाइड्रेशन सुन्दर रंग जम्मा गर्दा।
INOA को विस्तृत पोर्टफोलियोले समृद्ध रंग परिणाम प्रदान गर्दछ, सर्वोच्च कपाल को लागी सम्मान, र असीमित संभावनाहरू सिर्जना गर्न निजीकृत देखिन्छ सबै महिलाको लागि. INOA अनुभव हो गन्धबाट मुक्त र इष्टतम स्क्याल्प आराम प्रदान गर्दछ र परिणाममा %०% बढी चमक पहिलेको रंगको कपाल भन्दा
ग्राहकहरूले भिन्नता याद गर्नेछन्! INOA का साथ तपाईंको ग्राहक वफादारी सुधार गर्नुहोस्।
INOA छ बिभिन्न संग्रह तपाइँको सबै आवश्यकता र इच्छा पूरा गर्न। प्रयास गर्नुहोस् INOA गोल्ड नेचुरल कुनै मिक्सिंगको साथ न्यानोपनको स with्केतको साथ कभरेजको लागि। को लागी पुग्नुहोस् INOA उच्च प्रतिरोध गर्नुहोस् जब तपाईं अतिरिक्त शान्त टोन र फेडिंग प्रतिरोधको साथ शेडहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। र अवश्य पनि, प्रयोग गर्नुहोस् INOA Carmilane र तपाइँको redheads को लागी हाम्रो विशेष टेक्नोलोजी।
INOA फरक अनुभव गर्नुहोस्।